Colts: Superbowl Champs! Onye na-arụ ọrụ: Ndị na-efu! | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 5, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
MGBE: Emehiere m na nke a, nwute Careerbuilder!
Enweela ọtụtụ post banyere Superbowl. Naanị 2 cents bụ na ọ bụ n'ezie egwuregwu ka mma karịa ka anyị hụworo ogologo oge. Obi dị m ụtọ na ndị Colts meriri! Otu nzukọ nwere klaasị, ugwu, ma bụrụkwa onye onye ndu ndị Kristian ojii na-edu. Ọ bụ nnukwu ozi nye onye ọ bụla na ihe ọ ga-eme iji nwee ihe ịga nke ọma.
Onye mmeri ọzọ nke Superbowl bụ Careerbuilder… IMO, ha nwere mgbasa ozi Superbowl kacha mma. Agbanyeghị, na nzuzu a na-ahụkarị, ụlọ ọrụ (akwụkwọ akụkọ) ewepụla ahịa azụmaahịa ma agaghị ekwe ka ndị mmadụ tinye azụmahịa ha na saịtị ndị ọzọ. Ha anaghi enweta ya. Ọkpụkpụ. Pịa vidiyo ma ị ga-ahụ ihe m na-ekwu.
Onye ọ bụla mere mkpebi ịkwụsị nke a ka ọ ghara ịrịa ọrịa kwesịrị ịchụ ya n'ọrụ. Were ihe ngosi onyonyo elere anya na ụwa, gbakwunye azụmahịa gị mara mma, ma hapụ ndị mmadụ ka ha kesaa ma kwuo maka ha. Ndi Etufuru.
Lee mkpọsa ngwa ahịa ebe a:
Ndewo, a bụ m onye Mac. Ma abụ m PC.
Feb 5, 2007 na 12:30 PM
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ chọrọ n'ezie ime ndị na-azụ ahịa obi ụtọ, ha kwesịrị ịhapụ mgbasa ozi Super Bowl dị oke ọnụ ma tinye ego na Chief of Customer Officer, otu onye ike nwere ebubo itinye ya na ndị ahịa ahụ? uche.
Ma kama ha na-etinye oge na ego ha na-ejide n'aka na mgbasa ozi ha na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ, nke apụtaghị na ọ na-ere ngwaahịa ndị ọzọ. Ezigbo ahịa na-eju ndị ahịa anya site n’inye ha echiche ọhụrụ banyere otu esi aga eji otu ngwaahịa. Mgbasa ozi nke ndị mmadụ na-ahụkarị ma ọ bụ ndị ama ama ama ama nwere ike ịchị ọchị, mana o yighị ka ha ga-eweta ahịa. Maka dollar ọ bụla ị na-emefu, ị ga - ahụ dollar ma m ji obi m niile na ụlọ ọrụ ndị a na - ewepụta nde $ 2.6 ọzọ maka mgbasa ozi ndị a.
Ahịa kwesịrị ịkwụsị iche na ahịa nwere ike kee ihe. Ọ ga-ere ngwaahịa na ọrụ. Mgbe ụfọdụ, obere ihe okike kachasị dị irè.
Onye isi nke MSCO
Feb 5, 2007 na 1:27 PM
Enwere 'ụdị' nke a na-atụ anya ya maka Superbowl Ads. Comedy bụ n'ezie atụmanya. Ọzọkwa, ntochi ke aka mbọn… ị na-echeta na-akpa ọchị na mgbasa ozi karịa ndị dị oké njọ omume. Isi okwu m na post a bụ na Careerbuilder tinyere ego ahụ, mee ọtụtụ ihe, wee tufuo ya niile site na ịhapụ ịhapụ ahịa ịrịa ka ọ weghara. Ọ bụ ihe ihere.
Ekwenyere m na enwere ike iji ego ahụ mee ihe. Echere m na Superbowl Ads bụ n'ezie ịgba chaa chaa… GoDaddy gbara chaa chaa n'afọ gara aga wee merie. N'afọ a, m ga-adị njikere nzọ na mgbasa ozi ga-enweghị mmetụta ha chọrọ. Mgbasa Superbowl nwere ike ịnweta ndị mmadụ aka gị - mana naanị ị nwere ike idobe ha. Obere ego na ihe okike na 'idebe' akụkụ nke usoro ga-enwe nlọghachi ka mma!
Daalụ maka ịgụ na ịza ajụjụ!
Feb 5, 2007 na 3:34 PM
Ọ dịkarịa ala, ha zipụrụ na YouTube. Ya mere, ha anaghị ekwe ka itinye ha na vidiyo ahụ dum, mana kedu ka njọ ha mere? I zipụrụ vidiyo ahụ.
Ekwenyesiri m ike na njikwa njikwa n'azụ ya bụ na otu a ka ha nwee ike ịhụ ihe ndị a na-ekwu n'otu ebe.
Enweghị m ike iche ihe kpatara ị ga - eji tinye ya na YouTube, ka ndị mmadụ jikọta ya, mana manye ndị mmadụ ịlaghachi na YouTube ikiri.
Feb 5, 2007 na 5:36 PM
Amaghị m ihe ha chere bụ. E nwere n'ezie dịghị embed koodu na ha na saịtị ọ bụla… M nwara mbanye anataghị ikike eriri na nwetara ihe ị na-ahụ n'elu. Ọ dị oke njọ - ha na-emebi nzube nke YouTube na ịkparịta ụka n'Socialntanet.